सिके राउतको सरप्राइज ! डरलाग्दा काल्पनिक तस्वीर बनाउन थाले, मधेस आन्दोलनका क्रममा नाकाबन्दीसम्म – Kathmandu Daily
सिके राउतको सरप्राइज ! डरलाग्दा काल्पनिक तस्वीर बनाउन थाले, मधेस आन्दोलनका क्रममा नाकाबन्दीसम्म
सिके राउतबारे काठमाडौंमा शुरुदेखि भ्रमहरु फैलाइयो । उनलाई धेरै नै बढाइ–चढाइ प्रस्तुत गरियो । भयको हाउगुजी फैलाइयो । उनी र उनको संगठन देशको सबैभन्दा ठूलो खतरा हो भनेर प्रचार गरियो ।
सिके राउतले जब स्वराज आन्दोलनको एजेण्डा घोषणा गरे र पक्राउ परे, राष्ट्रवादी धारका मान्छेहरुले उनीबारे अनेक डरलाग्दा काल्पनिक तस्वीर बनाउन थाले । उनलाई देशकै सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौतीका रुपमा प्रस्तुत गर्न थालियो ।
त्यसपछि सुरक्षा निकायका अनेक प्रतिवेदनहरुमा उनको नाम उल्लेख हुन थाल्यो ।
सिके राउतको व्यक्तित्व र एजेण्डाबारे मधेस र पहाडमा अलग–अलग धारणा रहेका थिए । मधेसमा उनको ब्यक्तित्वप्रति धेरै आकर्षण तर एजेण्डाबारे मौनता थियो । पहाडमा उनको एजेण्डाबारे घोर घृणा र ब्यक्तित्वप्रति मौनता ।
तर, मधेसी समाजले मुक्तिको बाटो स्वतन्त्र मधेसलाई देख्यो कि देखेन ? कतिपय उनका समर्थकहरुले भन्थे, ‘अहिले भन्नलाई पो स्वतन्त्र मधेस भन्छन्, भोलि वार्ताको बेला लेनदेन हुने हो । तर, यो मान्छे नेता चाहिँ बन्नुपर्छ । किनभने अहिलेसम्मका नेताहरुभन्दा यिनी पढेलेखेका, त्यागी देखिएका छन् । यिनले केही गर्लान् जस्तो छ ।
मेरो बुझाइमा मधेसी समाज निकै भावनात्मक छ । समाजमा हरेकले चरम विभेदको महसुस गरेको छ । एउटा मधेसी दलितलाई गएर सोध्नुस् वा एरिस्टोक््रयाट मधेसी ब्राह्मणलाई, सबैसँग पहाडिया समाज र नेपाली राज्यले विभेद गरेको आआफनै ब्यक्तिगत कथाहरु छन्, पीडाहरु छन् । मधेसमा विभेद भोगेको ब्यक्तिगत कथ्यहरु (इन्डिभिजुअल न्यारेटिभ) निकै बलिया छन् ।
११ बुँदे सहमतिमा कुनै एक वा दुई शब्दहरुमात्रको फरक–फरक अर्थ लाग्न सक्छ । त्यसरी शाब्दिक बिवेचना अदालतमा मुद्दाको बहस गर्दा वकिललाई बढी काम लाग्ने कुरा हो । तर, ११ बुँदे सहमतिको स्पिरिट, प्रक्रिया र सार्वजानिक घोषणासभाको दृश्यले प्रष्ट हुन्छ, सिके राउतले पृथकतावादी धारको राजनीतिलाई छोडेकै हुन् ।
यहाँनेर राज्यपक्षले पनि बुझनु जरुरी छ, मधेसमा पृथकतावादी धारको राजनीति सर्वथा नयाँचाँहि होइन । यस धारका पहिलो नेता सिके राउत हुँदा पनि होइनन् । जयकृष्ण गोइतको आन्दोलन जारी नै छ । त्यसैले यसखाले आन्दोलनको स्थायी सामाधान सिके राउतसँग वा कुनै पात्र विशेषसँगको सहमति मात्र हुन सक्दैन ।
अब सिके राउतले दल खोले हुन्छ । प्रश्न उठ्न सक्छ, यो गर्दा फाइदा के हुन्छ ? अथवा उहाँले किन मूलधारको राजनीति गर्नुपर्छ ? किनभने मधेसी समाजमा बहुआयामिक विभेद छ । सामाजिक विभेद छ । आर्थिक विभेद छ । चरम वर्गीय बिभेद छ ।
तर, सिके राउतले पार्टी खोल्ने काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्न गाह्रो छ । काठमाडौंले सिके राउतको नाम सुनेको ५÷६ वर्ष भयो । म उनलाई झण्डै २० वर्षदेखि चिन्छु । उनले यस्तो राजनीति गर्लान् भन्ने लागेको थिएन । साह्रै सोझो, सज्जन, पढालु मान्छे थिए ।